निजी तथा आवासीय विद्यालयमध्ये ५० प्रतिशत विद्यालय बन्द हुनसक्ने ! – Namaste Dainik
August 15, 2020 August 15, 2020 NamastedainikLeaveaComment on निजी तथा आवासीय विद्यालयमध्ये ५० प्रतिशत विद्यालय बन्द हुनसक्ने !
प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पूरी घरभाडा, शिक्षक र कर्मतारीको खर्च, अरु सञ्चालन खर्च र बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थाका कारण ५० प्रतिशत विद्यालय अब खुल्नै नसक्ने हो कि भन्नेमा पुगिसकेको बताउँछन् । कोभिड लम्बिँदै जाँदा त्यस्तो संख्या अझै बढ्नसक्ने उनको भनाइ छ । देशभर कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि सरकारले मानवीय गतिविधिलाई थप कडाइ गर्दै गएको छ । यसअघि भदौ १ गतेदेखि खुल्ने भनिएको शिक्षण संस्था अनिश्चितकालसम्मका लागि बन्द गरिएको छ ।
‘चार महिनासम्म पढाइलाई त रिकभर गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले सोचेका थियौं । अभिभावकहरुलाई पनि कन्भिन्स गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो’ निजी विद्यालयका एकजना सञ्चालक भन्छन्, ‘अहिले त कोरोना पनि बढ्दै गएको छ, कहिले खुल्ने निश्चित छैन । अब अभिभावकहरुबाट वर्षभरीको शुल्क लेऊ भन्न पनि मिल्दैन, रिकभर गरेर पठाउँछु भन्न पनि सकिँदैन । भाडा तिर्ने र शिक्षक कर्मचारीलाई कसरी पाल्ने भन्ने समस्या चाहिँ अर्कोतिर छ ।’ ती सञ्चालकका अनुसार अब कम्तीमा १ महिना भर्ना खुल्ने सम्भावना छैन । १ महिनापछि भर्ना खुल्यो भने पनि चाडबाडअघि कोही पढ्न आउने छैनन् । दशैं, तिहार लगायत चाडवाड सकिँदा मंसिर लाग्छ । यो वर्ष ५ महिना पढ्न पनि विद्यार्थीलाई मुस्किल छ ।